Iphone jailbreak(မြန်မာ) [Software]
Myanmar IT Resource Forum » MOBILE & GAMERS ZONE » » Mobile Zone » Iphone jailbreak(မြန်မာ) [Software]
1 Iphone jailbreak(မြန်မာ) [Software] on 24th December 2009, 10:43 am
iphone နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ဒီဖိုရမ်ထဲမှာ တော်တော်များများတင်ထားတာတွေ့ ရပါတယ်
ဒီပို့ စ် ကတော့ မြန်မာလို jailbreak လုပ်နည်းလေးပါ
ဒီဖိုရမ်မှာ မြန်မာလိုတင်ထားတာမရှိတာနဲ့လိုရမယ်ရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
iphone ကို redsnow နဲ့jailbreak လုပ်နည်းပါ...
iphone အား jailbreak (ခေါ်) ထောင်ဖောက်ခြင်း
ကျွန်တော့်ကို တစ်မျိုးမထင်ကြနဲ့ဦး .ထောင်ဖောက် တယ်ဆိုတာက တင်စားလိုက်တာ
. ကျွန်တော်တို့ apple ကနေ ထုတ်တဲ့ iphone
တွေမှာက စပြီး ထုတ်ကတည်းက သတ်မှတ်ချက် တွေနဲ့ပါ . သီချင်းကို ပြန်ပြီး
ကူးထည့်လို့မရအောင် လုပ်ထားတာမျိုး၊ sim card ကို သူသတ်မှတ်ထားတဲ့
နိုင်ငံမဟုတ်ရင် လိုင်းမ၀င်အောင် လုပ်တာမျိုး၊ နောက်တစ်ခုက iphone
ထဲမှာ ဆော့မည့် ဂိမ်းများနှင့် အခြားသော တိုလီမိုလီများကို install
လုပ်ဖို့အတွက်ကို ပိုက်ဆံသွင်းပြီး အကောင့် လုပ်ထားမှ ရမယ့်စနစ်ဖြင့်
ပြုလုပ်ထားပါတယ် . အဲ့ဒါကို ကျွန်တော်တို့က အခုလို jailbreak လို့ခေါ်တဲ့
ထောင်ဖောက်နည်းကို သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် Sim card ကို international sim
card အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ . apple က မဟုတ်တဲ့ တစ်ခြား ပြင်ပ game
တွေကိုလဲ download လုပ်ခွင့်ရရှိမှာပါ .. ကဲပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့
itunes ကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါ . itunes မရှိရင် အောက်မှဒေါင်းလိုက်ပါ
[/url][url=http://www.megaupload.com/?d=KNMYZVO3]http://www.megaupload.com/?d=KNMYZVO3[/url] (သို့ ) [url=http://rs781.rapidshare.com/files/209700474/iTunesSetup.exe]http://rs781.rapidshare.com/files/209700474/iTunesSetup.exe[/url]
iphone ကို unlock လုပ်ဖို့အတွက် iphone ကို unlock နှင့် jailbreak လုပ်ရန် နှစ်နည်းရှိပါတယ် . Redsnow နှင့် လုပ်တာရယ် . Quickpwn နှင့်လုပ်တာရယ်ပါ . အခုကတော့ redsnow ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ unlock လုပ်နည်းကို ပြောပြပါ့မယ်
redsnow ကို အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်
3.0.1 ( 3G) [url=http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6972.20090731.Zx3Rr/iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw]
3.0.1 ( 2G) [url=http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-6974.20090731.Cf4Tg/iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw]
(၃) နောက်ဆုံး home button 1 ခုထဲ နှိပ်ထားပါ (power botton ကို လွှတ်လိုက်ပါ)
. ဆက်နှိပ်ထားရင်းကနေ သူစပြီးတော့ install စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ home button
ကို လွှတ်လိုက်လို့ရပါပြီ .အဲ့ဒီ့မှာလဲ အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားပါတယ် . အဓိကက
ခလုပ်နှိပ်တာ အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ . မနှိပ်တတ်ခင်ကတော့ လက်ရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး .
movie download> [url=http://adf.ly/246619/http://www.mediafire.com/?jtny2i0jd22]mediafire.com ?jtny2i0jd22[url=http://www.nyinaymin.com/]www.nyinaymin.com
2 Re: Iphone jailbreak(မြန်မာ) [Software] on 27th April 2010, 10:57 pm
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2010-03-04
iPhone 3Gs v3.1.1 (7E18) ကို Jailbreak လုပ်ချင်တယ်. ဆော့ဖ်ဝဲလ်များရရင်ပြောပါဦး။ အဲ့အတွက် ဘာများ လိုအပ်မလဲခင်ဗျာ. ရခဲ့ရင် နည်းပညာလေးများမျှဝေပေးပါဦ။ နောက်ပြီ Jailbreak လုပ်ခြင်းအတွက် ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်လေးများလည်းပြောပါဥိးခင်ဗျာ။ iPhone ကိုချင်လွန်းလို့ အကြွေးနဲ့ ၀ယ်ကိုင်ထားတာပါ ။ ပြည့်ပြည့်၀၀လေးသုံးချင်လို့ပါ။ စောင့်မျှော်လျက်ပါ။